MMS SCANDALS: Muuqaallada Foosha Xun Ee Laga Qabtay Jillayaasha Caanka Ah Ee Bollywood Sida Shahid Iyo Kareena - Hablaha Media Network
MMS SCANDALS: Muuqaallada Foosha Xun Ee Laga Qabtay Jillayaasha Caanka Ah Ee Bollywood Sida Shahid Iyo Kareena
HMN:- Shirkadda aflaanta dalka India ee Bollywood mararka qaar ayaa ceebtoodu bannaanka timaadaa, waxaana jira fadeexado loogu magac daray Multimedia Messaging Service Scandals (MMS Scandals) kuwaasoo hareeyey Bollywood.
Arrintaani ma ahan wax dhaca inta badan, laakiin muuqaallo aan loogu talogalin in la baahiyo oo ay ku jiraan dad caan ah ayaa waxaa laga xadayaa aflaanta Bollywood ka dibna internet-ka ayaa lagu baahinayaa.
Si kastaba ha ahaatee, marka muuqaalladaani ay bannaanka usoo bexeen Bollywood ceeb ayaa ku habsatay, mana ahan oo keliya muuqaalladaani kuwo laga soo xaday aflaanta oo keliya ee waxaa sidoo kale ku jira muuqaallo si shaqsi ah looga soo duubay shaqsiyaadka caanka ah ee Bollywood iyagoo wadaaga nolosha sariirta.
Hase yeeshee, marka la cabirayo fadeexadaha MMS Videos ee sannadkaan dhammaadka ah 2016 laga qabtay atooreyaasha iyo atariishooyinka Bollywood waa kuwo laga soo xaday aflaanta oo keliya waana muuqaallo aan loogu talogelin in la baahiyo.
Shabakadda Filimside.net ayaana halkaan idinkugu soo gudbin doonta qeybta koowaad ee muuqaallada MMS Scandals ee sannadkaan 2016 laga qabtay jillayaasha caanka ah ee Bollywood iyo kuwii hore ee laga yaabo in aadan waxba kala socon.
Muuqaalkii Foolxumada Ahaa Ee Laga Soo Duubay Atariishada Radhika Apte Ee Filimkii Parched: Muuqaalkaan oo ah mid anshax xumo ah ayaa waxaa kasoo muuqatay Radhika oo ka qaawan qeybta sarre, sidoo kale muuqaalkaan waxaa ku jiray jillaaga Adil Hussain.
Muuqaalkaan ayaana waxaa ka dhashay dood fara badan ka dib markii uu caan ka noqday isla markaana si weyn loogu wadaagay baraha bulshada, wuxuuna ugu horreeyaa liiska muuqaallada loo aqoonsaday MMS Scandals ee sannadkaan 2016 laga qabtay jillayaasha caanka ah ee Bollywood.
Muuqaalkii Sameynta Jaceylka Ee Laga Qabtay Johnny Baweja Iyo Reeth Mazumder: Atoorahaan Johnny waxay ilmo adeer yihiin jillaaga Bollywood Harman Baweja, laakiin waxaa si weyn baraha bulshada loogu wadaagay muuqaalkii laga qabtay isaga iyo atariishada Reeth Mazumder kaasoo ahaa muuqaal ay ugu talogaleen inay ku muujiyaan jilliin jaceylkooda filimka.
Muuqaalkaani wuxuu gabi ahaanba fashil ku noqday filimkii ugu horreeyey ee atoorahaan iyo atariishadaan ee A Scandall. Muuqaalkaan ayaana wuxuu gabi ahaanba u muuqday sida muuqaal galmo ah oo kale.
Shumiskii Shahid Kapoor Iyo Kareena Kapoor Khan: Waxay ahaayeen shimbirihii jaceylka, laakiin fashil ayaa ku dhacay Shahid iyo Kareena markii si qalad ah muuqaal laga duubay uu ugu baahay internet-ka.
Muuqaalkaas waxaa kasoo muuqday Shahid iyo Kareena oo shumis ka dareen badan midkii loogu talogalay shaashadd uu dhexmarayo wuxuuna noqday muuqaal caan ah oo si weyn loo wadaagay.
La soco qeybta labaad ee sheekadaan iyo wixii dhexmaray Sharad Malhotra iyo Melani Nazareth si la mid ah Asmit Patel iyo Riya Sen, berri xilligaan oo kale ayaana idinla wadaagi doonaa.